Sida loo Beddelaan iyo Guba AVI in DVD on Mac / Win (Windows 8 ka mid ah)
Sida loo Beddelaan AVI in DVD ee Mac / Windows (Windows 10 ka mid ah)
Beddelaan AVI in DVD
1. Beddelaan AVI in ISO
2. Nuqul DVD in AVI la gacan-jabis
3. U beddelaan AVI in DVD
4. U beddelaan AVI in DVD la iDVD
5. Beddelaan AVI in DVD for Windows 8
6. Guba AVI in DVD la Windows DVD Kan sameeyey,
AVI waa qaabka video inta badan la isticmaalo. Tiro badan oo ka mid ah filimada waa qaab this. Si kastaba ha ahaatee, ma si toos ah u ciyaarin karin ciyaaryahan DVD ah. Sidaa darteed, waa mid aad u caadi ah in loogu badalo AVI in DVD si ay si wanaagsan ku raaxaysan videos ku ciyaaryahanka DVD ama TV.
Wixii madal Windows, AVI videos si fudud loo rogi karaa in DVD la software badan DVD ku gubanayso. Haddii aad rabto (Mountain Libaaxa, Libaaxa ka mid ah) si ay u gubaan AVI in DVD ee Mac, sida caadiga ah waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay si loogu badalo AVI in DVD (ee video format QuickTime u Mac) hore iyo gubi DVD la iDVD ama codsiyada kale ee la mid ah. Haddii kale, sababta aan u isticmaali gubi AVI DVD ah in si toos ah u baddalaya iyo gubtay AVI videos in DVD ee Mac in one stop? Just heli video ah Converter ugu habboon ee hoosta.
Qeybta 1: AVI ugu powerfull in DVD Video Converter for Windows / Mac
Qeybta 2: Best AVI in DVD Video Converter for Windows / Mac
• Gubashada video dhow in qaab kasta, astaysto aad DVD la arrimo menu DVD oo lacag la'aan ah.
• Edit, In kor loo qaado & shakhsiyeeyo Your Videos File.
• Beddelaan in ka badan 150 qaabab jiraan 4K / 3D.
• APEXTRANS technology badasha files 30x ka dhaqso badan waxyaabaha la tartamayay.
• Download videos ka goobood oo kale la wadaago 1000+ video la One Click!
• Si fudud u qoraan hoorto online videos
• Streaming Media Your TV.
• Video Transfer aan Cable USB.
OS taageerayaan: Windows 10/8/7 / XP / Vista / 2003, Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10,10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6
AVI in DVD Video Converter Isbarbar:
Professional 1-riix si loogu badalo AVI, MOV, wmv, MKV, Dvix, Mpg, videos VOB iyo gubi in DVD.
Ku dar duubey oo dheeraad ah si loo badbaadiyo xasuus qiimo.
Samee DVD-Video cajalid, galalka DVD ama image ISO ee tayo sare leh.
Smartly taam u disc xitaa aad content meel ka badato awoodda disc ah.
Goob Advanced sida xawaaraha DVD gubashada iyo tayada video si loo hubiyo natiijada ugu fiican.
Tallaabooyinka fudud si loogu badalo AVI in DVD u Win (Windows 10 ka mid ah)
1. AVI Load videos
Ka dib marka aad soo dajiyo AVI DVD gubi, waxaa la furo iyo ku dhufo "Import 'inay ku shuban aad isha AVI videos. Haddii kale, waxaad ka wadid aad u adag jiidi karaan AVI videos direclty galay suuqa kala barnaamijka. Waxa kale oo la keeno karo Pictures iyo duubey.
2. Edit AVI videos ka dhigi DVD bedeley (optional)
AVI in DVD gubi ka dhigaysa mid aad u habboon in isbedel yar video ah ee software la mid ah. Riix icon qalin sokow video kasta oo horyaalka si ay u helaan suuqa kala edit ah. Halkan, waxaad ka heli doontaa dhammaan qalabka tafatirka caadi ah waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay. sida miraha beeraha, jar, isku shaandheyn, watermark, saamaynta, iyo in ka badan.
Ka dib markii in, u tag 'Menu' tab in astaysto menu ah DVD aad. Waxaa jira qaabab kala duwan marto menu dhisay-in, loox iyo badhamada play si aad u doorato. Ka dib markii xulashada template menu ah, waxa kale oo aad ku dari kartaa qoraalka, music asalka, iyo aad u badan. Marka aad dhamaysato qoraalka menu, waxaad ku eegaan kartaa DVD show si aad u hubiso haddii everythong dhaco sida aad jeceshahay.
3. Start AVI in DVD gubashadii
Hadda, aad u yimaadeen inay tallaabo la soo dhaafay. Riix Gubashada iyo dooran TV caadiga ah xaq: "NTSC" 30fps waxaa loo isticmaalaa in USA, Canada iyo Japan, halka "Pal" waa 25fps, loo isticmaalo in Europe iyo Asia. Ka dib markii in, guji Guba si ay u bilaabaan AVI video inay DVD diinta isla markiiba. Markii ugu diinta ku xiran tahay xajmiga file AVI ilo, iyo tayada aad doorato. Sida caadiga ah baaxadda weyn ama tayada sare, markii in ka badan waxa ay u baahan doonaan. Marka AVI in DVD gubanaya sameeyo, waxaad daawan kartaa DVD isticmaalaya ciyaaryahan kasta DVD guriga iyadoo TV a.
Video Tutorial: Sida loo Beddelaan AVI in DVD
Sida loo rogo ama Guba iyo Torrent Movies in DVD ee Mac / Win
Dhibaatooyinka Dhignaashada Xalinta u FLV
BDMV Converter: Sida loo Beddelaan BDMV in AVI, MP4, MOV (Quicktime) iwm
Sida loo Beddelaan M2TS AVCHD / MTS in Lugood
Sida loo soo biir / Isku dar / midowdo MOV (Quicktime) Faylal ay la MOV Joiner
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan AVI in DVD ee Mac / Windows (Windows 10 ka mid ah)